Fitsidihan'ny Praiministra any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara-Amboasary atsimo | Primature
Mahazoarivo, 20 novambra 2020 – Ho fanohizana sy fanamafisana ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana, amin’ny ady amin’ny kere, any amin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny, dia nidina ifotony nijery ny zavamisy sy ny dingana efa vita ny delegasiona tarihin’ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Tao amin’ny distrikan’i Amboasary Atsimo – Faritra Anôsy, raha nihaona sy nanome toromarika ho an’ireo tomponandraiki-panjakana isan-tsokajiny sy ny solontena avy amin’ny sehatra tsy miankina ny Praiministra, dia nanambara fa : “ambony dia ambony ny fanamby miandry antsika raha ny ady amin’ny kere aty Atsimo no resahina.
Mbola hisy ny fotoana maharitra kokoa handinihana ny vahaolana entina amin’izany; hijerena ny lesoka, ny tokony hahitsy ary hitondrana ny vahaolana maharitra izay hapetraka, na eo anivon’ny fitondrana foibe na ny aty an-toerana izay miatrika ny ady.”
Ho an’i Amboasary manokana, mahakasika ny fanampiana ireo olona tratry ny fahasahiranana, dia hapetraka ny « centre opérationnel de coordination » izay ho eo ambany fitarihan’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena.
Notsindrian’ny Lehiben’ny governemanta rahateo ny hametrahana ho laharam-pahamehana ny fiaraha-miasa, ny fahaiza-mitarika eo amin’ny fandrindràn’asa ary ny tokony hanatevenana sy hanatsarana bebe kokoa ny fomba fiasa (methode de travail).
Hisy ny fanaraha-maso akaiky ny fivoaran’ny toe-javamisy mahakasika ny “kere”.
Momba ny fanisana ny mponina hisy ny lamina manokana apetraka isaky ny kaominina amin’ny fampitàna ireo angom-baovao alefa any amin’ity foibe ao Amboasary ity
Omena fitaovana sy teti-bola mifanaraka amin’izay filàny io ivo-toerana io, hoy hatrany ny Praiministra ary aorian’ny fipetrahan’ny Centre de commandement opérationnel ao Amboasary dia ezahina ny hametraka sampan’ity foibe ity isaky ny kaominina 18 mandrafitra ny distrika.
Ireo olom-boafidy ihany koa dia tokony hanampy amin’ny fanamoràna ny asa rehetra mikasika ny fametrahana izany lamina vaovao izany, araka ny nambaran’ ny Lehiben’ny governemanta.
Jerena mandritra izao dian’ny delegasiona izao koa ny toerana hametrahana ny CRNM na centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale, izay hiasa mandavan-taona ary hasiana “Banque alimentaire” eo akaikiny. Io “banque alimentaire” io dia toerana natokana hametrahana sakafo, hanampiana ireo izay ianjadian’ny olana ara-tsakafo rehefa main-tany. Afaka manatona io CRNM io ihany koa mandavan-taona, ireo olona misedra fahasahiranana ara-tsakafo.
Marihina fa ankoatra an’Amboasary dia hapetraka ao Ambovombe, Tsihombe, Beloha, ary Ampanihy ny CRNM.
Hojerena ihany koa ny vahaolana mikasika ny rano mandritra izao fandalovan’ny delegasiona any Atsimo izao ary hanampy tosika amin’izany ny Minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana sy ny Minisitry ny Rano, ankoatra ireo mpiara-miombon’antoka izay miara misalahy amintsika, toy ny mpikaroka iray avy atsy La Reunion izay mijery ny mahakasika ny “désalinisation”. Eo koa ny fandinihana ny fampiasana ny ranon’i Efaho.
← Fanamafisana ny fifandraisan’i Madagasikara sy Arabie Saoudite
Fitondrana vahaolana ho famongorana tanteraka ny hanoanana mitarazoka na kere →